Geely ၏ 10,000 Zeekr 001 သည် တရားဝင် အော့ ဖ် လိုင်း ဖြစ်သည် - Pandaily
Jan 28, 2022, 20:07ညနေ 2022/01/28 23:08:06 Pandaily
10,000 Zeekr 001, Geely ၏ ကား အမှတ်တံဆိပ် Zeekr ၏ပထမဆုံး မော်ဒယ်ကြာသပတေး နေ့က တရားဝင် အော့ ဖ် လိုင်း ။ ၎င်း၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံသည် စားသုံး သူများ ပေးပို့ ရန် စောင့်ဆိုင်း ရသော အချိန် ကိုလျှော့ချရန် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှုကို ကာကွယ်ရန် အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ဆောင် နေသည်။
ယနေ့အထိ Zeekr သည်စုစုပေါင်း ၃၇ ၉၆ Zeekr 001 မော်တော်ယာဉ် များကို တင်ပို့ ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ လမှ ၈၈. ၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။
Zeekr 001 သည် 100 kWh lithium-ion ဘက်ထရီ ကိုတပ်ဆင် ထားပြီး Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. (CATL) မှ ထောက်ပံ့သည်။ ယာဉ် မှ လာ နိုင်သည်။ သုည မှ ၁၀၀ ကီလိုမီတာ အထိ ၃. ၈ စက္ကန့် သာ ကြာသည်။ ထို့အပြင် မော်ဒယ် အရည်-အအေး အပူ စုပ်စက် ကိုအသုံးပြုသည်။
001 လေယာဉ် ရပ်ဆိုင်း မှုကို အသုံးပြု၍ မြေပြင် ရှင်းလင်း ရေးကို ၁၁၇ မီလီမီတာ မှ ၂ ၀၅ မီလီမီတာ အကြား သတ်မှတ်နိုင်သည်။ Zeekr က 001 သည် ကီလိုမီတာ ၇၀၀ အား အပြည့် ဖြင့် မောင်းနှင် နိုင်ပြီး ၎င်း၏ အားသွင်း နိုင်စွမ်း သည် ငါး မိနစ် သာ အားသွင်း ချိန် ၁၂၀ ကီလိုမီတာ ကိုထောက်ပံ့ ပေးနိုင် လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အပြိုင်အဆိုင် မြင့်မားသော စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် ဈေးကွက်တွင် ထုတ်လုပ်မှု မြန်နှုန်း သည်က ုန် အမှတ်တံဆိပ် များအတွက် သူတို့၏ စွမ်းအား ကိုပြသ ရန်နှင့် စျေးကွက် ဝေစု ကိုတိုးမြှင့် ရန်အတွက် အထိရောက် ဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ Zeekr သည် ထုတ်လုပ်မှု ရည်မှန်းချက် ၁၀၀၀၀ သို့ရောက် ရန် ၉၉ ရက် သာ ကြာ ခဲ့သည်။ သို့သော် လျှပ်စစ် ကား စတင် သူများအတွက် ထုတ်ကုန် အရည်အသွေး သည် ပို၍ အရေးကြီးသည်။
လွန်ခဲ့သော ရက်အနည်းငယ် က ပိုင်ရှင် အချို့က Zeekr 001 ကိုမောင်းနှင် နေစဉ် Dashboard တွင် “power damage” နှင့် “ESC anomaly” အမှား မက်ဆေ့ခ်ျ များ ရုတ်တရက် ပေါ်လာ သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
သည်လို ချို့ယွင်း မှုဟာ ကား အတွင်း ခန်း အတွင်း အင်ဗာတာ မှာ ပြဿနာ ဖြစ် နိုင်တယ်လို့ စက်မှု လုပ်ငန်းရှင် အချို့က ယူဆ ကြပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ အအေး ပေး စနစ် ဒီဇိုင်း မပါဘဲ အင်ဗာတာ ၏ ပံ့ပိုးမှု ဗို့ အားကို မျက်စိကန်း စွာ တိုးမြှင့် ခြင်းသည် အင်ဗာတာ ရှိ IGBT module ၏အပူ လွန်ကျူး မှု ပျက်ကွက် စေသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Mobileye က Zeekr နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး L4 Class မောင်း သူမဲ့ ကား ထုတ်လုပ် မယ်လို့ ကြေညာ
Zeekr 001 ပိုင်ရှင် များ မှတင်ပြသော အခြား ပြ issues နာ များမှာ မျက်နှာ အသိအမှတ်ပြု ခြင်း ပျက်ကွက် ခြင်း၊ ယာဉ် စနစ် ရုတ်တရက် ပြန်လည်စတင် ခြင်းနှင့် မိုးမျှော် တိုက် အရောင် နှင့် အွန်လိုင်း ထိတွေ့မှု အကြား ကိုက်ညီ မှုမရှိ ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
၂၀ ၂၂ ဂွမ်ဒေါင်း ၊ ဟောင်ကောင်၊ မကာအို နှင့် ပင်လယ်အော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အော်တို ပြ ပွဲတွင် Geely ၏လျှပ်စစ် စမတ် ကား အမှတ်တံဆိပ် Zeekr က၎င်း၏ ၂၀၀၀၀ မြောက် Zeekr 001 မော်ဒယ်ကို တရားဝင် တင်ပို့ ကြောင်း စနေ နေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။